XOG: M/weyne Farmaajo oo safaro deg deg ah ugu baxaya Jabuuti & Itoobiya, Ujeedada.
MUQDISHO(P-TIMES) – Madaxweynaha Soomaaliya Max’ed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maalmaha soo socda u socdaalaya wadamada Itoobiya & Jabuuti, isagoo halkaas u tagaya sidii uu kulamo ula yeelan lahaa madaxda dalalkaas oo ay ka wada hadlayaan arrimaha ku saabsan iskaashiga labada dhinac.
Madaxweyne Farmaajo oo hadda culeys siyaasadeed ka dareemaya siyaasadda gudaha, gaar ahaana labo dawlad gobaleed ee Jubbaland iyo Puntland ayaa socdaaladiisan ay qeyb ka yihiin arrimahaas.
Itoobiya ayey Madaxweynaha Soomaaliya isku raacsaneeyn in wax laga qabto xaaladdaha dawlad gobaleedyada gudaha, gaar ahaana kuwa taabacsan dawladdiisa, waxaan 19kii bisha August fashilmay isku day ay labada dawladoodba ku doonayeen in ay ku qabtaan Madaxweynaha Jubbaland.
HALKAAN KA DAAWO WARAR
Qodobada, wada hadalada ayaa la rumeysan yahay in aysan ka marneyn iskaashigii wadamadu ay horey ugu heshiiyeen in la dhaqaajiyo, waxaana horey wararku u sheegayaan in madaxda Soomaaliya iyo Itoobiya isku raaceen in loo hiiliyo dawlad xoog leh oo Soomaaliya kahirgasha.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa dhawana sheegay in wada hadal lagu dhameyn doono xiisadda u dhaxaysa Xukuumadda Faderaalka & Jubbaland, isagoo sheegay in dhinacyada oo dhan looga baahan yahay in ay daganaansho muujiyaan.